प्रति केजि १० लाख पर्ने केशर खेती गर्ने कि ? केशर खेतीबारे सम्पुर्ण जानकारी - Tree Media News
द्गम स्थल दक्षिण यूरोपमा रहेको केशरको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई विश्वकै महँगो र दूर्लव कृषि उपजको रुपमा लिईन्छ । प्रति के.जि १० लाखमा बिक्रि हुने केशर नेपालमा भने पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको पाईदैन । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ७ देखि १० केजि सम्म केशर उत्पादन भएको पाईन्छ ।
केशरमा पाइने प्रमुख रासायनिक तत्व
केशर खेतीको लागि उपयुक्त हावापानी
केशर खेतीको लागि उपयुक्त माटो
गाना निकाल्ने र भण्डार गर्ने
गाना भण्डार गर्ने ठाउँ
कामशक्ति बढाउने केसरले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ, गर्नुहोस् यसरी प्रयोग
केसर एक बनस्पति हो । यसको फूल सुन्दर त छ नै, यो फूलमा सञ्जीवनी बूटीमा पाईने गूण विद्यमान छ । असल केसर पानीमा पूरै घुल्छ । भिजेको कपडामा रगड्दा पनि पहेलो रंग निस्कन्छ । तातो पनीमा लगाउँदा गाढा पहेँलो रंग निस्कन्छ ।
आयुर्वेदकाअनुसार केसरले मानिसको कामशक्ति बढाउँछ । यसले मुत्राशय, कलेजो, मष्तिष्क र आँखाको समस्या पनि हटाउँछ । साथै यसको सेवनले गर्भाशयको पीडा कम गराउँछ । ल्यूकोरिया तथा हिस्टेरिया जस्ता समस्या भोगिरहेका मानिसहरुलाई पनि फाइदा गर्छ । भर्खर जन्मेको बच्चालाई दुधमा मिलाएर केसर खुवाउनाले बच्चा सुन्दर र हृष्टपुष्ट हुन्छ । अनियमित महिनावारी पनि हटाउँछ ।
पुरुषको वीर्य शक्ति बढाउनको लागि मह, बदाम र केसर मिलाएर सेवन गर्नाले फाइदा गर्छ । पेट सम्वन्धि विभिन्न समस्याहरु अपच, जलन, वायु विकार, आदि भएमा केसरले फाइदा गर्छ । शरीरको कुनै भागमा चोट लागेमा या शरीरमा कुनै विषालु झुस पसेमा केसरको लेप लगाउनाले फाइदा मिल्छ । नाकबाट रगत बग्ने समस्या भएमा चन्दनलाई केसरको साथमा पिसेर निधारमा लेप लगाउनाले आँखा र मष्तिष्कमा शीतलता महशुस हुन्छ, नाकबाट रगत बगत छोड्छ । टाउको दुखेको पनि हटेर जान्छ ।
१–२ टुक्रा केसर, २–४ थोपा दूधलाई राम्ररी घोट्ने । यसमा एक चम्चा दुध मिलाएर बिहान बेलुका बच्चालाई पिलाउँदा फाइदा हुन्छ । केसर जाइफल वा ल्वाङ्गको लेप बनाएर बच्चाको टाउको, नाक छाती वा पीठमा लगाईदिँदा सन्चो हुन्छ । साथै राती बच्चा राम्ररी सुत्न सक्छ । केसर महिलाको लागि अति लाभदायक छ । विषेश गरी महिलाको महिनावारीको बेला दुख्ने समस्या, गर्भाशयको सुजन जस्ता समस्या देखिएमा केसरको सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ ।
बच्चालाई बार–बार पखाला लागेमा केसरको १–२ पंखा भाँडामा राखेर त्यसमा २–३ थोपा पानी राखेर घोट्नुहोस् । यसमा पानीको साथ जाइफल आपको गुठली, सूठो बराबर मिलाएर पिस्नुहोस् र यसमा केसर मिलाएर हरेक बिहान बेलुका एक चम्चा बच्चालाई पिलाउनुहोस् । थोरै मुलहठीको दुधमा एक चिम्टी केसर लगाएर घोेट्नुहोस् । यसलाई पेष्ट बनाएर राती सुत्ने बेला टाउकोमा लगाउनुहोसे । तपाईको तालु खुइलिएको समस्या हटेर जान्छ ।
Previous Postमस्कोमा विमानमा आगो लाग्यो, ४१ जनाको मृत्युPrevious Post
Next Postकसरी गर्ने माछापालन ? कृषकले जान्नै पर्ने कुराNext Post